7 Zvikonzero Zvako Zvemukati Zvinotadza Kuenderana neMireniyamu | Martech Zone
Kune dzimwe nguva apo ini pandinoverenga zvakatsanangurwa zvakawanikwa pane huwandu hwevanhu kana mapoka enzvimbo andinogomera zvishoma. Handisi kureva kuti uyu mushumo wekuti NewsCred haina kukosha kuti vashambadzi varambe vachifunga, asi ndinotenda kuti isu kazhinji tinowanzo tarisa nedata uye dzimwe nguva tinosvika pamhedziso dzisina chokwadi.
Ini ndinowanzo bvunza mumwe munhu, ungade here kusvika kune zviuru gumi nevanhu vane 10,000% yekupindura mwero kana vanhu mazana mashanu vane 1% yekupindura mwero? Kana iwe uchinge uchinetseka nemathematics - iyo yekupedzisira inozoguma kune vamwe 500 vakapindura. Nekudaro, dzimwe nguva hazvisi kuenda kune avhareji… dzimwe nguva iwe unofanirwa kuenda wakadzika pane iko niches.
Muchokwadi, zvine chekuita nezviuru zvemamirioni, ini ndingatopokana kuti kusvika zvimwe zvinogona kukanganisa. Iyo data kubva kuongororo iyi inoratidza kuti havadi kutengeswa… saka sei iwe uchigona kuwedzera kusvika kwako kuti uzvitengese kune aya ese masvikiro ekudyidzana nemazano? Ini ndichiri kungakurudzira vezvenhau senge svikiro, asi zano racho richasiyana zvachose zvichienderana nezvikamu zvandiri kutsvaga kuita nazvo.
Nei mabhurandi aine hanya nezviuru zvemamirioni? Pakazosvika 2020, zviuru zvemamirioni zvinokwana kudarika $ 1.4 trillion mukushandisa simba. Kune zvigadzirwa, izvo zvinoreva kuti kana usiri kusvika mamirioni, hausi kufambirana neramangwana. Zvemukati zvinotyaira brand kubatana, asi kana zvemukati zvichikundikana zvachose kubatanidza vateereri vako, pane ichocho poindi? 62% yezviuru zvemamirioni vanonzwa kuti zvemukati zvemukati zvinoita kuti vanzwe vakabatana uye vakavimbika kuchiratidzo, asi chete 32% inowana ano maratidziro ezuva anobatsira.
NewsCred inopa rairo inotevera kuraira nezviuru zvemamirioni:
Tailor zvemukati kune akasiyana 'vanhu zvetsika nemagariro.
Ita shuwa yezviri mukati zvinobatsira kana kubatsira kune kugadzirisa matambudziko ezuva nezuva ezviuru zvemamirioni.
Dzivisa kuva kutengesa-y kana kuzvishambadza.
Vavarira kuva kufunga-pfungwa uye akangwara.
Usabhengere hutachiona kana zvibvumirano zvemagariro ega.
Iva nechokwadi Personalization nemutengo, nzvimbo, nhangemutange, nezvimwe.
Shandisa mafomati ari nyore gaya uye govana.
Kuti udzidze zvakawanda nezve kushandisa zvirimo kushambadza kumamirioni, kusanganisira ina dzenyaya dzedzidzo yemakemikari anoitora nemazvo, tora NhauCred yemahara Millennials gwara nhasi!
Tags: zvemukati infographicContent Marketinginfographicmillenialsmireniyumu infographicnhau